Centre Of Excellence အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြောင်း လက်မှတ်ကို CEO Dr JS Wong မှလက်ခံရယူ - ISEC Eye Centre Myanmar
Centre Of Excellence အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြောင်း လက်မှတ်ကို CEO Dr JS Wong မှလက်ခံရယူ
အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံအခြေစိုက် မျက်စိ ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကုသရေးဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ် နေသည့် ကမ႓ာကျော် ALCON ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအနေဖြင့် ISEC မျက်စိရောဂါဆိုင်ရာ ဆေးရုံကြီးအား Centre Of Excellence အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြောင်း လက်မှတ်ကို CEO Dr JS Wong မှလက်ခံရယူခဲ့ပါသည်။ ဤ ကဲ့သို့ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု Centre ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ISEC မှဆရာဝန်ကြီးများမှ မျိုးဆက်သစ်မျက်စိဆရာဝန်များ၊ ဘွဲ့လွန် သင်တန်းတက်ရောက်နေသည့် ဆရာဝန်များ နှင့် Fellowship များပြုလုပ်နေကြသည့် ဆရာဝန်မျိုးဆက်သစ်များ အတွက်နောက်ဆုံးပေါ် မျက်စိရောဂါဆိုင်ရာ သင်ကြားရေးတို့အတွက် များစွာအထောက်အကူပြုသွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါ၍ ISEC Eye Centre Myanmar မှ အထူးဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
We are proud to be one of few eye centres to be appointed as postgraduate teaching and preceptorship programme to fellow young ophthalmologists from the region by Alcon Laboratories. Officially presenting the Centre of Excellence in Ophthalmology certificate to our CEO, Dr JS Wong, is Mr Sandeev, GM of Alcon, and looking on is Mr Tarun Gupta, Medical Affairs Head of Alcon.
With this official recognition and grant from Alcon, ISEC doctors will now playamore active role in mentoring young ophthalmologists in the region in their learning of the advanced science and art of ophthalmology
ISEC Specialist Eye Centre
Call Now 09448282822
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက +959448282821
A5, မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ စိန့်ဂျွန်း Shopping Mall အနီး၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်၊မြန်မာ
Tel:+95 1 386 800,+959448282821-2
ISEC Eye Centre Yangon
☎ +95 1 386800 , 📞 09 448282821~2
#ophthalmology #mentor #preceptor #centreofexcellence #teaching #education #surgery #iseceyes #alcon
← အတွင်းတိမ် နှင့်အထွေထွေ ရောဂါဆိုင်ရာမိုးဦးရာသီအထူး Package
ဆီးချို နှင့် အမြင်လွှာရောဂါဆိုင်ရာ စစ်ဆေးကုသလိုသူတို့အတွက် ဇွန်လ မိုးဦးရာသီ အထူး Package →